Sheekh Mahad Warsame oo ka hadlay howlgalkii Maxaabiista lagusoo furtay ee Boosaaso ka dhacay [Dhageyso].
Sunday March 07, 2021 - 19:41:15
Hogaanka Sare ee Al Shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii dhawaan ka dhacay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Bayaankaan oo ay soo gudbisay Mu’asasada Al Kataa’ib, ayaa waxa uu ka soo baxay hogaanka sare ee Xarakada Al Shabaab, waxaana soo jeediyay bayaankaasi Sh Abuu Cabdi Raxmaan Mahad Warsame xafidahullaah oo ka mid ah hoggaanka 'Mujaahidiinta'.
Bayaankaan oo ka koobnaa qodobo dhowr ah ayaa ugu horeeyntii waxaa lagu faahfaahiyay qaabkii uu dhacay duullaankaasi barakeysan, kaasi oo ay Mujaahidiinta ku soo furteen 400 oo maxaabiis muslimiin ah oo ay ku jireen Gabdho Muslimaad ah.
Halkan ka degso kalimadda MP3